ဘယ်အသင်းအမှားလုပ်ပြီး တန်းဆင်းသွားမလဲ ဘယ်အသင်း ကျန်ရစ်မလဲ
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဘယ်သူကျန်ခဲ့မလဲ၊ ဘယ်သူ တန်းဆင်းရမလဲ
30 Apr 2018 . 5:48 PM
၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကတော့ ရာသီပိတ်သိမ်းမယ့်အချိန်ကို တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာခဲ့ပါ ပြီ။ ချန်ပီယံဆုအတွက်အဖြေပေါ်သွားပြီဖြစ်ပေမယ့် ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်၊ တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲတွေက ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တန်းမဆင်းရရေးအတွက် ရုန်းကန်ရမယ့်အသင်းတွေရဲ့ Effort က ပိုပြီးသိသာလာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီတိုင်းလိုလို ရာသီပိတ်ခါနီးပြီဆိုရင် တန်း ဆင်းဇုန်အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေ့ရှိတဲ့အပြင် အသင်းကြီးတွေတောင် သူတို့ကိုအရှုံးပေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် တန်းဆင်းဇုန်တိုက်ပွဲက ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုထက် ပိုပြီးပြင်းထန်လေ့ရှိတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ပရီးမီးယားလိဂ်တန်းဆင်းဇုန်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အသင်းတွေက ၁၈. ဆောက်သမ်တန် (၃၅ပွဲ- ၃၂မှတ်)၊၁၉. စတုတ်စီးတီး(၃၆ပွဲ – ၃၀မှတ်)၊၂၀. ၀က်စ်ဘရွန်း (၃၆ပွဲ-၂၈မှတ်)တို့ဖြစ်ပြီးဝက်စ်ဘရွန်းအသင်းကတော့ မျှော်လင့်ချက်နည်းနေပါပြီ။ သင်္ချာနည်းအရထက် ဖြစ် နိုင်ခြေအရပြောရရင်တော့ အဆင့်(၁၁)နေရာမှာရပ်တည်နေတဲ့ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်အသင်းက စပြီး အမှတ် ပေးဇယားအောက်ခြေအထိ တန်းဆင်းမယ့် အန္တရာယ်ရှိနေဆဲပါ။ အဆင့်(၁၁)အသင်းနဲ့ (၁၈)က အသင်းတို့ရဲ့အကြား အမှတ်ကွာဟချက်က (၆)မှတ်သာရှိပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာက ရမှတ်တူရင် ဂိုးကွာခြားချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပြီး ဂိုးကွာခြားချက်နည်းတဲ့အသင်းတွေအတွက် အခွင့်အရေးပိုရှိမှာပါ။
တန်းဆင်းဇုန် (၃)သင်းထဲမှာ ၀က်စ်ဘရွန်းအသင်းအခွင့်အရေးအနည်းဆုံးဖြစ်နေတာက လက်ကျန်နှစ်ပွဲမှာစပါး(အိမ်)၊ ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်(အဝေး)တို့ကို ကစားရမှာဖြစ်ပြီး အဆင့်(၁၇)နေရာက ဆွမ်ဆီးအသင်းထက်တစ်ပွဲပို အမှတ်ကွာဟချက်က (၅)မှတ်အထိရှိနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကျန်ပွဲတွေမှာ တန်းဆင်းဇုန်အသင်းတွေနဲ့ တန်းဆင်းဇုန်နားကပ်နေတဲ့အသင်းတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့်ပွဲစဉ်တွေ ပါဝင်နေတာကြောင့်အကြိတ်အနယ်ရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။
အခုလောလောဆယ် ဆောက်သမ်တန်အသင်းနဲ့ (၅)မှတ်ကွာဟနေတဲ့ အဆင့်(၁၄)နေရာက ဘရိုက်တန်အသင်းကတော့ အသက်ရှူနည်းနည်းချောင်နေဆဲဖြစ်ပေမယ့် အမှားလုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။ တန်းဆင်းဇုန်အန္တရာယ်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အသင်းတွေထဲမှာ ဆွမ်ဆီးပြီးရင် ၀က်စ်ဟမ်း၊ ဟတ်ဒါဖီးလ်တို့လည်း ပါဝင်နေပါသေးတယ်။ သူတို့နှစ်သင်းဟာ ဆောက်သမ်တန်အသင်းနဲ့(၃၅)ပွဲတူညီနေပြီး အမှတ်ကွာဟချက်ကလည်း (၃)မှတ်သာရှိတာကြောင့် ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီက ၀က်စ်ဟမ်းအသင်း (၄၂)မှတ်အထိရခဲ့တာတောင် တန်းဆင်းခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးသလို၊ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ (၃၄)မှတ်နဲ့ ၀က်စ်ဘရွန်း ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ရာသီလက်ကျန်ပွဲတွေမှာ ဘယ်အသင်းအမှားလုပ်ပြီး တန်းဆင်းသွားမလဲ ဘယ်အသင်း ကျန်ရစ်မလဲဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
၀က်စ်ဟမ်းအသင်းရဲ့ လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ – လက်စတာ(အဝေး)၊ မန်ယူ(အိမ်)၊ အဲဗာတန်(အိမ်)
ဟတ်ဒါဖီးလ်အသင်းရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ – မန်စီးတီး(အဝေး)၊ ချယ်လ်ဆီး(အဝေး)၊ အာဆင်နယ်(အိမ်)
ဆွမ်ဆီးအသင်းရဲ့ လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ – ဘုန်းမောက်(အဝေး)၊ ဆောက်သမ်တန် (အိမ်)၊ စတုတ်စီးတီး (အိမ်)
ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ – အဲဗာတန်(အဝေး)၊ ဆောက်သမ်တန်(အိမ်)၊ မန်စီးတီး (အိမ်)
စတုတ်စီးတီးအသင်းရဲ့ လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ – ပဲလေ့စ်(အိမ်)၊ ဆွမ်ဆီး(အဝေး)
၀က်စ်ဘရွန်းအသင်းရဲ့ လက်ကျန်ပွဲစဉ်များ – စပါး(အိမ်)၊ ပဲလေ့စ်(အဝေး)
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ဘယျသူကနျြခဲ့မလဲ၊ ဘယျသူ တနျးဆငျးရမလဲ
၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကတော့ ရာသီပိတျသိမျးမယျ့အခြိနျကို တဖွညျးဖွညျးနီးကပျလာခဲ့ပါ ပွီ။ ခနျြပီယံဆုအတှကျအဖွပေျေါသှားပွီဖွဈပမေယျ့ ဥရောပပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့၊ တနျးဆငျးဇုနျတိုကျပှဲတှကေ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျနဆေဲဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ တနျးမဆငျးရရေးအတှကျ ရုနျးကနျရမယျ့အသငျးတှရေဲ့ Effort က ပိုပွီးသိသာလာပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ ပရီးမီးယားလိဂျရာသီတိုငျးလိုလို ရာသီပိတျခါနီးပွီဆိုရငျ တနျး ဆငျးဇုနျအသငျးတှရေဲ့ပှဲစဉျတှကေ စိတျဝငျစားဖို့ကောငျးလရှေိ့တဲ့အပွငျ အသငျးကွီးတှတေောငျ သူတို့ကိုအရှုံးပေးရတဲ့အဖွဈမြိုးတှေ ရှိခဲ့တာကွောငျ့ တနျးဆငျးဇုနျတိုကျပှဲက ဥရောပပွိုငျပှဲဝငျခှငျ့အတှကျ ပွိုငျဆိုငျမှုထကျ ပိုပွီးပွငျးထနျလရှေိ့တယျ။ အခုလောလောဆယျတော့ ပရီးမီးယားလိဂျတနျးဆငျးဇုနျထဲမှာ ရှိနတေဲ့ အသငျးတှကေ ၁၈. ဆောကျသမျတနျ (၃၅ပှဲ- ၃၂မှတျ)၊၁၉. စတုတျစီးတီး(၃၆ပှဲ – ၃၀မှတျ)၊၂၀. ဝကျဈဘရှနျး (၃၆ပှဲ-၂၈မှတျ)တို့ဖွဈပွီးဝကျဈဘရှနျးအသငျးကတော့ မြှျောလငျ့ခကျြနညျးနပေါပွီ။ သင်ျခြာနညျးအရထကျ ဖွဈ နိုငျခွအေရပွောရရငျတော့ အဆငျ့(၁၁)နရောမှာရပျတညျနတေဲ့ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့အသငျးက စပွီး အမှတျ ပေးဇယားအောကျခွအေထိ တနျးဆငျးမယျ့ အန်တရာယျရှိနဆေဲပါ။ အဆငျ့(၁၁)အသငျးနဲ့ (၁၈)က အသငျးတို့ရဲ့အကွား အမှတျကှာဟခကျြက (၆)မှတျသာရှိပါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျမှာက ရမှတျတူရငျ ဂိုးကှာခွားခကျြနဲ့ ဆုံးဖွတျမှာဖွဈပွီး ဂိုးကှာခွားခကျြနညျးတဲ့အသငျးတှအေတှကျ အခှငျ့အရေးပိုရှိမှာပါ။
တနျးဆငျးဇုနျ (၃)သငျးထဲမှာ ဝကျဈဘရှနျးအသငျးအခှငျ့အရေးအနညျးဆုံးဖွဈနတောက လကျကနျြနှဈပှဲမှာစပါး(အိမျ)၊ ခရစ်စတယျပဲလစျေ့(အဝေး)တို့ကို ကစားရမှာဖွဈပွီး အဆငျ့(၁၇)နရောက ဆှမျဆီးအသငျးထကျတဈပှဲပို အမှတျကှာဟခကျြက (၅)မှတျအထိရှိနတောကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ လကျကနျြပှဲတှမှော တနျးဆငျးဇုနျအသငျးတှနေဲ့ တနျးဆငျးဇုနျနားကပျနတေဲ့အသငျးတှေ ထိပျတိုကျတှမေ့ယျ့ပှဲစဉျတှေ ပါဝငျနတောကွောငျ့အကွိတျအနယျရှိမှာ အသအေခြာပါပဲ။
အခုလောလောဆယျ ဆောကျသမျတနျအသငျးနဲ့ (၅)မှတျကှာဟနတေဲ့ အဆငျ့(၁၄)နရောက ဘရိုကျတနျအသငျးကတော့ အသကျရှူနညျးနညျးခြောငျနဆေဲဖွဈပမေယျ့ အမှားလုပျလို့တော့ မရပါဘူး။ တနျးဆငျးဇုနျအန်တရာယျနဲ့ အနီးစပျဆုံးဖွဈနတေဲ့အသငျးတှထေဲမှာ ဆှမျဆီးပွီးရငျ ဝကျဈဟမျး၊ ဟတျဒါဖီးလျတို့လညျး ပါဝငျနပေါသေးတယျ။ သူတို့နှဈသငျးဟာ ဆောကျသမျတနျအသငျးနဲ့(၃၅)ပှဲတူညီနပွေီး အမှတျကှာဟခကျြကလညျး (၃)မှတျသာရှိတာကွောငျ့ ဘာမဆိုဖွဈသှားနိုငျတဲ့အနအေထားပါ။ ပရီးမီးယားလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီက ဝကျဈဟမျးအသငျး (၄၂)မှတျအထိရခဲ့တာတောငျ တနျးဆငျးခဲ့ရတဲ့ဖွဈရပျမြိုးရှိခဲ့ဖူးသလို၊ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီမှာ (၃၄)မှတျနဲ့ ဝကျဈဘရှနျး ကနျြရဈခဲ့တဲ့ဖွဈရပျမြိုးရှိခဲ့ဖူးတယျ။ ရာသီလကျကနျြပှဲတှမှော ဘယျအသငျးအမှားလုပျပွီး တနျးဆငျးသှားမလဲ ဘယျအသငျး ကနျြရဈမလဲဆိုတာ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
ဝကျဈဟမျးအသငျးရဲ့ လကျကနျြပှဲစဉျမြား – လကျစတာ(အဝေး)၊ မနျယူ(အိမျ)၊ အဲဗာတနျ(အိမျ)
ဟတျဒါဖီးလျအသငျးရဲ့လကျကနျြပှဲစဉျမြား – မနျစီးတီး(အဝေး)၊ ခယျြလျဆီး(အဝေး)၊ အာဆငျနယျ(အိမျ)
ဆှမျဆီးအသငျးရဲ့ လကျကနျြပှဲစဉျမြား– ဘုနျးမောကျ(အဝေး)၊ ဆောကျသမျတနျ (အိမျ)၊ စတုတျစီးတီး (အိမျ)
ဆောကျသမျတနျအသငျးရဲ့ လကျကနျြပှဲစဉျမြား – အဲဗာတနျ(အဝေး)၊ ဆောကျသမျတနျ(အိမျ)၊ မနျစီးတီး (အိမျ)
စတုတျစီးတီးအသငျးရဲ့ လကျကနျြပှဲစဉျမြား – ပဲလစျေ့(အိမျ)၊ ဆှမျဆီး(အဝေး)
ဝကျဈဘရှနျးအသငျးရဲ့ လကျကနျြပှဲစဉျမြား – စပါး(အိမျ)၊ ပဲလစျေ့(အဝေး)